Upenyu hwaJesu Hunozivisa “Uchenjeri Hunobva Kuna Mwari” | Swedera Pedyo
1-3. Vaimbova vavakidzani vaJesu vakati kudii nokudzidzisa kwake, uye chii chavakatadza kunzwisisa pamusoro pake?
VATEERERI vacho vakaoma mate mukanwa. Murume muduku Jesu akanga akamira pamberi pavo musinagogi achidzidzisa. Akanga asiri mueni kwavari—akanga akurira muguta ravo, uye kwemakore akanga ashanda pakati pavo ari muvezi. Zvimwe vamwe vavo vaitogara mudzimba dzavakanga vabatsirwa kuvaka naJesu, kana kuti zvimwe vairima minda yavo nemagejo nemajoko ayo akanga agadzira nemaoko ake pachake. * Asi vaizoita sei nokudzidzisa kweaimbova muvezi uyu?
2 Vazhinji vevaiteerera vaishamisika, vachibvunza kuti: “Munhu uyu akawana kupi uchenjeri uhwu?” Asi vaitaurawo kuti: “Uyu muvezi mwanakomana waMariya.” (Mateu 13:54-58; Mako 6:1-3) Zvinosiririsa kuti vamwe vaimbova vavakidzani vaJesu vakafunga vachiti, ‘Muvezi uyo anongova munhu womuno sesu.’ Pasinei nouchenjeri hwaiva mumashoko ake, vakamuramba. Vaisaziva kuti uchenjeri hwaaitaura hwakanga husiri hwake.
3 Jesu akawanepi uchenjeri uhwu? “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu,” akadaro, “asi ndezveakandituma.” (Johani 7:16) Muapostora Pauro akatsanangura kuti Jesu “akava kwatiri uchenjeri hunobva kuna Mwari.” (1 VaKorinde 1:30) Uchenjeri hwaJehovha pachake hunoratidzwa nokuMwanakomana wake, Jesu. Hungu, izvi zvakanga zviri zvechokwadi zvokuti Jesu aigona kutaura kuti: “Ini naBaba tiri vamwe.” (Johani 10:30) Ngationgorore nzvimbo nhatu idzo Jesu akaratidza “uchenjeri hunobva kuna Mwari.”
4. (a) Shoko raJesu raiva nomusoro wokuti chii, uye nei izvozvo zvaikosha zvikuru? (b) Nei zano raJesu rakanga richishanda nguva dzose uye rakanakira vateereri vake?
4 Kutanga, funga zvakadzidziswa naJesu. Musoro weshoko rake wakanga uri wokuti “mashoko akanaka oumambo.” (Ruka 4:43) Izvozvo zvaikosha zvikuru nemhaka yebasa iro Umambo hwaizoita mukureverera uchangamire hwaJehovha uye mukuunza zvikomborero zvinogara kwenguva refu kuvanhu. Mukudzidzisa kwake, Jesu akapawo mazano ouchenjeri okurarama kwezuva nezuva. Akaratidza kuti ndiye “Mupi Wezano Anoshamisa” akafanotaurwa. (Isaya 9:6, NW) Chokwadi, mazano ake aizotadza kushamisa sei? Aiva nezivo yakadzama yeShoko raMwari uye kuda kwake, ainzwisisa zvikuru zvakaita vanhu, uye aida vanhu kwazvo. Nokudaro, zano rake nguva dzose raishanda uye rakanakira vateereri vake. Jesu akataura “mashoko oupenyu husingaperi.” Hungu, kana rikateverwa, zano rake rinotungamirira kuruponeso.—Johani 6:68.
5. Ndedzipi dzakanga dziri dzimwe nhau idzo Jesu akataura nezvadzo muMharidzo yepaGomo?
5 Mharidzo yepaGomo muenzaniso wakasiyana wouchenjeri husina hwakafanana nahwo hunowanikwa mudzidziso dzaJesu. Mharidzo iyi, sezvakanyorwa pana Mateu 5:3–7:27, zvimwe yaizotora maminitsi 20 chete kuitaura. Zvisinei, zano rayo, harisi repane imwe nguva—rakakodzera nhasi sezvarakanga rakaita parakatanga kutaurwa. Jesu akataura nhau dzakasiyana-siyana, kusanganisira nzira yokuvandudza nayo ukama nevamwe (5:23-26, 38-42; 7:1-5, 12), nzira yokuchengeta nayo tsika dzakanaka (5:27-32), uye nzira yokurarama nayo upenyu hune chinangwa (6:19-24; 7:24-27). Asi Jesu haana kungoudza vateereri vake nzira youchenjeri chete; akavaratidza nokutsanangura, kushandisa pfungwa, uye kupa uchapupu.
6-8. (a) Zvikonzero zvipi zvinotimanikidza kurega kufunganya, zvinopiwa naJesu? (b) Chii chinoratidza kuti zano raJesu rinoratidza uchenjeri hunobva kumusoro?
6 Somuenzaniso, funga nezvezano raJesu rouchenjeri uye nzira yokubata nayo nokufunganya pamusoro pezvinhu zvenyama, sezvakanyorwa pana Mateu chitsauko 6. “Musafunganya pamusoro pemweya yenyu pamusoro pechamuchadya kana chamuchanwa, kana pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei,” Jesu anotiyambira kudaro. (Ndima 25) Zvokudya nezvokupfeka zvinhu zvinokosha zvinodikanwa uye tinongoberekwa tichitamburira kuwana zvinhu izvi. Asi Jesu anotiudza kuti “musafunganya” pamusoro pezvinhu zvakadaro. * Nei?
7 Teerera Jesu sezvaanotsanangura zvinogutsa. Sezvo Jehovha akatipa upenyu nomuviri, haagoni kugovera zvokudya zvokutsigira upenyu ihwohwo nezvokufuka zvokupfekedza muviri iwoyo here? (Ndima 25) Kana Mwari achipa shiri zvokudya nokushongedza maruva norunako, achatotarisira vanhu vake vanomunamata zvakakura sei! (Ndima 26, 28-30) Chaizvo, kufunganya kusina kukodzera kwagara hakuna zvakunobatsira. Hakugoni kuwedzera upenyu hwedu kunyange nechidimbu hacho. * (Ndima 27) Tingarega sei kufunganya? Jesu anotipa zano rokuti: Rambai muchipa kunamata Mwari nzvimbo yokutanga muupenyu. Avo vanoita kudaro vanogona kuva nechivimbo chokuti zvinodiwa zvavo zvose zvezuva nezuva “zvichawedzerwa” kwavari naBaba vavo vokudenga. (Ndima 33) Pakupedzisira, Jesu anopa zano rinoshanda zvikuru—tora zuva rimwe panguva. Unowedzererei funganyo dzanhasi nedzamangwana? (Ndima 34) Kunze kwaizvozvo, kuzvinetserei zvisina kukodzera nezvinhu zvinogona kutadza kuitika? Kushandisa zano rokuchenjera rakadaro kunogona kutidzivirira pakurwadziwa mwoyo kukuru munyika ino inodzvinyirira.
8 Sezviri pachena, zano iro Jesu akapa rinoshanda zvakafanana nhasi sezvaraiita panguva yarakapiwa anenge makore 2 000 akapfuura. Ihwohwo hahusi uchapupu hwouchenjeri hunobva kumusoro here? Kunyange zano rakanakisisa rinobva kuvanhu vanopa mazano rinozowanzoguma ronzi nderechinyakare rogadziridzwa kana kuti kutsiviwa munguva pfupi. Zvisinei, dzidziso dzaJesu hadzichinji nokufamba kwenguva. Asi izvozvo hazvifaniri kutishamisa, nokuti Mupi Wezano Anoshamisa uyu aitaura “mashoko aMwari.”—Johani 3:34.
9. Vamwe varwi vakati chii pamusoro pokudzidzisa kwaJesu, uye nei uku kwakanga kusiri kuwedzerera?
9 Pechipiri apo Jesu akaratidza uchenjeri hwaMwari pakanga pari pamadzidzisiro ake. Pane imwe nguva, vamwe varwi vakanga vatumwa kunomusunga vakadzoka vakabata maoko, vachiti: “Hapana mumwe munhu akambotaura zvakafanana neizvi.” (Johani 7:45, 46) Uku kwakanga kusiri kuwedzerera. Pavanhu vose vati vamborarama, Jesu, uyo aka“bva kunzvimbo dzokumusoro,” ndiye akanga ane dura rezivo guru pane vose. (Johani 8:23) Zvechokwadi akadzidzisa sezvaisagona kuitwa nomumwe munhu. Funga nezvenzira mbiri bedzi dzokudzidzisa kwoMudzidzisi akachenjera uyu.
“Mapoka evanhu akashamiswa nemadzidzisire ake”
10, 11. (a) Nei tichiyemura zvikuru kushandisa kwaJesu mienzaniso? (b) Mifananidzo chii, uye muenzaniso upi unoratidza kuti nei mifananidzo yaJesu ichishanda zvikuru pakudzidzisa?
10 Kushandisa mienzaniso zvinobudirira. Tinoudzwa kuti, “Jesu akataura . . . kumapoka evanhu nemifananidzo.” “Zvechokwadi, aisataura kwavari pasina mufananidzo.” (Mateu 13:34) Tinoyemura zvikuru kukwanisa kwake iye oga kudzidzisa chokwadi chakadzama achishandisa zvinhu zvezuva nezuva. Varimi vari kudyara mbeu, vakadzi vari kugadzirira kubika chingwa, vana vari kutamba pamusika, varedzi vari kukweva utava, vafudzi vari kutsvaka gwai rakarasika—izvi zvakanga zviri zvinhu izvo vateereri vake vakanga vaona kakawanda. Apo chokwadi chinokosha chinobatanidzwa nezvinhu zvinozivikanwa, chokwadi ichocho chinopinda nokukurumidza uye zvakasimba mupfungwa nomwoyo.—Mateu 11:16-19; 13:3-8, 33, 47-50; 18:12-14.
11 Jesu aiwanzoshandisa mifananidzo, nyaya pfupi dzinobudisa chokwadi chetsika kana kuti chomudzimu. Sezvo nyaya dziri nyore kubata nokuyeuka kupfuura pfungwa dzinongotaurwa, mifananidzo yaibatsira kuchengetedza kudzidzisa kwaJesu. Mumifananidzo mizhinji, Jesu akarondedzera Baba vake nemashoko anobudisa mifananidzo yakajeka akanga asingagoni kukanganwika nyore. Somuenzaniso, ndiani angatadza kunzwisisa mufananidzo womwanakomana anopambadza—kuti kana anenge arasika akaratidza kupfidza kwechokwadi, Jehovha achamunzwira tsitsi ogamuchira munhu akadaro nounyoro kuti adzoke?—Ruka 15:11-32.
12. (a) Jesu akashandisa sei mibvunzo mukudzidzisa kwake? (b) Jesu akanyaradza sei avo vakanga vasina chokwadi nechiremera chake?
12 Kushandisa mibvunzo nounyanzvi. Jesu akashandisa mibvunzo kuita kuti vateereri vake vazvipedzisire voga, aone vavariro dzavo, kana kuti kuita zvisarudzo. (Mateu 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46) Vatungamiriri vechitendero pavakabvunza kana akanga apiwa chiremera naMwari, Jesu akapindura kuti: “Rubhabhatidzo rwaiitwa naJohani rwakabva kudenga kana kuvanhu here?” Mubvunzo uyu wakavasiya vapererwa, vakatanga kutaurirana vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati kwatiri, ‘Nei, ipapo, musina kumutenda?’ Asi, kana tikati, ‘Rwakabva kuvanhu,’ tinotya boka revanhu, nokuti vose vanorangarira Johani somuprofita.” Pakupedzisira, vakapindura kuti: “Hatizivi.” (Mako 11:27-33; Mateu 21:23-27) Nomubvunzo uri nyore, Jesu akavasiya vasina romuromo ndokubudisa unyengeri hwaiva mumwoyo yavo.
13-15. Mufananidzo womuSamariya aiva muvakidzani akanaka unoratidza sei uchenjeri hwaJesu?
13 Jesu dzimwe nguva aibatanidza nzira dzacho nokubatanidza mibvunzo inoita kuti munhu afunge nemienzaniso yake. Apo rimwe gweta rechiJudha rakabvunza Jesu chaidiwa kuwana upenyu husingaperi, Jesu akamuendesa kuMutemo waMosesi, uyo unorayira kuda Mwari nomuvakidzani. Achida kuzviita akarurama, murume wacho akabvunza kuti: “Chaizvoizvo muvakidzani wangu ndiani?” Jesu akapindura nokutaura imwe nyaya. Mumwe murume wechiJudha akanga achifamba oga paakarohwa nemakororo, ayo akamusiya oda kufa. Pakapfuura nevaJudha vaviri, kutanga mupristi tevere muRevhi. Vose vakamusiya akadaro. Asi zvino mumwe muSamariya akasvikawo nepo. Anzwa tsitsi kwazvo, zvinyoronyoro akarapa maronda omuJudha uye norudo ndokutakura murume wacho kuti aende paimba yevaeni yakachengeteka kwaaigona kupora ari. Achipedzisa nyaya yacho Jesu akabvunza aimubvunza kuti: “Ndiani weava vatatu anoratidzika kwauri kuva akazviita muvakidzani womurume akawirwa nemakororo?” Murume wacho zvakamumanikidza kupindura achiti: “Akamuitira ngoni.”—Ruka 10:25-37.
14 Mufananidzo wacho unoratidza sei uchenjeri hwaJesu? Muzuva raJesu, vaJudha vaishandisira shoko rokuti “muvakidzani” kune vaichengeta tsika dzavo chete—sezviri pachena kwete kuvaSamariya. (Johani 4:9) Kudai Jesu akanga ataura nyaya yacho achiti muSamariya ndiye akarohwa akabatsirwa nomuJudha, izvozvo zvaizodai zvakaratidza kusasarura here? Jesu akaronga nyaya yacho nokuchenjera kuti muSamariya nounyoro atarisire muJudha. Onawo mubvunzo uyo Jesu akabvunza pakupera kwenyaya yacho. Akasiya kutaura nezveshoko rokuti “muvakidzani.” Gweta racho nokudaro rakanga rabvunza kuti: ‘Ndiani wandingaratidza rudo somuvakidzani wangu?’ Asi Jesu akabvunza kuti: “Ndiani pavatatu ava anoratidza kwauri kuva akazviratidza kuva muvakidzani?” Jesu akanyanya kutaura kwete nezvemunhu akaitirwa mutsa, akarohwa wacho, asi akataura nezveakaratidza mutsa, muSamariya. Muvakidzani wechokwadi anotanga kuratidza rudo kune vamwe pasinei nedzinza ravo. Hapana imwe nzira iyo Jesu angadai akatsanangura nayo pfungwa yake zvinobudirira kupfuura apa.
15 Zvinoshamisa here kuti vanhu vakashamiswa “nemadzidzisire” aJesu uye vakanzwa vachiswededzwa pedyo naye? (Mateu 7:28, 29) Pane imwe nguva “boka guru revanhu” rakagara naye kwemazuva matatu, risingadyi!—Mako 8:1, 2.
16. Jesu akapa ‘uchapupu hunoshanda’ munzirai hwokuti aitungamirirwa nouchenjeri hwaMwari?
16 Pechitatu apo Jesu akaratidza uchenjeri hwaJehovha pakanga pari pamararamiro ake. Uchenjeri hunoshandisika; hunoshanda. “Ndiani akachenjera pakati penyu?” akabvunza kudaro mudzidzi Jakobho. Akabva azvipindurira mubvunzo wake achiti: “Ngaape uchapupu hwacho hunoshanda nomufambiro wake wakanaka.” (Jakobho 3:13, The New English Bible) Nzira iyo Jesu akazvibata nayo yakapa ‘uchapupu hunoshanda’ hwokuti aitungamirirwa nouchenjeri hwaMwari. Ngatimboonai kuti akaratidza sei kunzwisisa, zvose muupenyu hwake nomukubata kwake nevamwe.
17. Chii chinoratidza kuti Jesu aiva nomwero zvikuru muupenyu hwake?
17 Wakaona here kuti vanhu vasinganzwisisi vanowanzonyanyisa pakuita zvinhu? Hungu, zvinotoda uchenjeri kuva pakati nepakati. Achiratidza uchenjeri hwaMwari, Jesu aiva nomwero zvikuru. Kupfuura zvimwe zvose, aipa zvinhu zvomudzimu nzvimbo yokutanga muupenyu hwake. Akanga akabatikana zvikuru nebasa rokuzivisa mashoko akanaka. Akati: “Ndakabudira izvozvo.” (Mako 1:38) Zvinhu zvenyama zvakanga zvisinganyanyi kukosha kwaari; zvinoratidza sokuti aiva nezvinhu zvenyama zvishomanana. (Mateu 8:20) Zvisinei, akanga asiri munhu ainyanya kuzviomesera. Kufanana naBaba vake, “Mwari anofara,” Jesu akanga ari munhu anofara, uye akawedzera vamwe mufaro. (1 Timoti 1:11; 6:15) Paakaenda kumutambo womuchato—sezviri pachena chiitiko chaiva nemimhanzi nokuimba, nokufara—akanga asipo kuti angofundumwara aripo pachiitiko chacho. Pakapera waini, akashandura mvura kuva waini yakanaka kwazvo, chokunwa ch“inofadza mwoyo womunhu.” (Pisarema 104:15; Johani 2:1-11) Jesu akabvuma paakakokerwa zvokudya kazhinji, uye aiwanzoshandisa nguva yakadaro kudzidzisa.—Ruka 10:38-42; 14:1-6.
18. Jesu akaratidza sei kunzwisisa kwakakwana pakubata kwake nevadzidzi vake?
18 Jesu akaratidza kunzwisisa kwakakwana mukubata kwake nevamwe. Kunzwisisa kwake zvakaita vanhu kwakamupa maonero akajeka pamusoro pevadzidzi vake. Ainyatsoziva kuti vakanga vasina kukwana. Asi aiona unhu hwavo hwakanaka. Akaona zvaikwanisa kuitwa nevarume ava avo Jehovha akanga akweva. (Johani 6:44) Pasinei nokutadza kwavo, Jesu akaratidza kuda kuvimba navo. Achiratidza chivimbo ichocho, akapa basa guru kuvadzidzi vake. Akavapa basa rokuparidza mashoko akanaka, uye aiva nechivimbo mukukwanisa kwavo kuita basa iroro. (Mateu 28:19, 20) Bhuku raMabasa rinopupurira kuti vakaita nokutendeseka basa raakanga avarayira kuita. (Mabasa 2:41, 42; 4:33; 5:27-32) Saka sezviri pachena Jesu akanga achenjera kuvimba navo.
19. Jesu akaratidza sei kuti aiva “munyoro uye anozvininipisa mumwoyo”?
19 Sezvatinoona muChitsauko 20, Bhaibheri rinobatanidza kuzvininipisa nounyoro nouchenjeri. Jehovha chokwadi, anopa muenzaniso wakanaka panhau iyi. Asi zvakadini naJesu? Zvinofadza kuona kuzvininipisa kwakaratidzwa naJesu pakubata nevadzidzi vake. Somunhu akakwana akanga ari mukuru kwavari. Asi, haana kutarisira vadzidzi vake pasi. Haana kumboda kuvaita kuti vanzwe vasingakoshi kana kuti vasingabatsiri. Pane kudaro, aifungawo nezvezvavakanga vasingagoni nokushivirira kukanganisa kwavo. (Mako 14:34-38; Johani 16:12) Hazviratidzi here nei kunyange vana vainzwa vakasununguka kuna Jesu? Chokwadi vakanzwa vachiswededzwa pedyo naye nemhaka yokuti vaiona kuti akanga ari “munyoro uye anozvininipisa mumwoyo.”—Mateu 11:29; Mako 10:13-16.
20. Jesu akaratidza sei kunzwisisa mukubata nomukadzi weVemamwe Marudzi aiva nemwanasikana aiva nedhimoni?
20 Jesu akaratidza kuzvininipisa kwaMwari mune imwezve nzira inokosha. Ainzwisisa, kana kuti kuzvirereka, apo tsitsi dzaiita kuti izvi zvive zvakafanira. Somuenzaniso, yeuka apo mumwe mukadzi weVemamwe Marudzi akamuteterera kuti arape mwanasikana wake aiva nedhimoni rakaipa kwazvo. Munzira nhatu dzakasiyana-siyana, Jesu akaratidza pakutanga kuti akanga asiri kuzomubatsira—kutanga, nokurega kumupindura; kechipiri, nokutaura zvakananga kuti akanga atumwa, kwete kuVemamwe Marudzi, asi kuvaJudha; uye yechitatu, nokupa mufananidzo waireva zvimwe chetezvo nenzira yomutsa. Zvisinei, mukadzi wacho akaomerera achipa uchapupu hwokutenda kunoshamisa. Achiona mamiriro ezvinhu akasiyana aya, Jesu akaita sei? Zvaakanga aratidza kuti aisazoita ndizvo zvaakaita. Akaporesa mwanasikana womukadzi wacho. (Mateu 15:21-28) Kuzvininipisa kunoshamisa, handizvo here? Uye yeuka, kuzvininipisa ndiwo musimboti wouchenjeri hwechokwadi.
21. Nei tichifanira kuedza kutevedzera unhu, matauriro, uye nzira dzaJesu?
21 Tinoonga sei kuti mabhuku eEvhangeri anoratidza mashoko nezviito zvomunhu akachenjera kupfuura vose vati vamborarama! Ngatiyeukei kuti Jesu akanga ari mufananidzo wakakwana waBaba vake. Nokutevedzera unhu, matauriro pamwe nenzira dzaJesu, tinenge tichiva nouchenjeri hunobva kumusoro. Muchitsauko chinotevera, tichaona kuti tingashandisa sei uchenjeri hwaMwari muupenyu hwedu.
^ ndima 1 Munguva inotaurwa muBhaibheri, vavezi vaiita basa rokuvaka dzimba, kuveza fanicha, nokugadzira midziyo yokurimisa. Justin Martyr, womuzana remakore rechipiri C.E., akanyora nezvaJesu achiti: “Akanga ane tsika yokushanda somuvezi paakanga ari pakati pevanhu, achigadzira magejo nemajoko.”
^ ndima 6 Shoko rechiito rechiGiriki rinoshandurwa kuti “funganya” rinoreva “kutsauswa mundangariro.” Sokushandiswa kwarakaitwa pana Mateu 6:25, rinoreva kushushikana kwokutya kunotsausa kana kuti kunokamura pfungwa, kuchibvisa mufaro muupenyu.
^ ndima 7 Chaizvo, kuongorora kwesayenzi kwakaratidza kuti kunyanya kufunganya nokuora mwoyo kunogona kutiisa mungozi yokuva nechirwere chomwoyo nezvimwe zvirwere zvakawanda zvinogona kudimbudzira upenyu.
Zvirevo 8:22-31 Kurondedzerwa kwouchenjeri somunhu kunowirirana sei nezvinotaurwa neBhaibheri pamusoro poMwanakomana waJehovha wedangwe?
Mateu 13:10-15 Mienzaniso yaJesu yaishanda sei pakuratidza mafungiro omwoyo yevateereri vake?
Johani 1:9-18 Nei Jesu akakwanisa kuzivisa uchenjeri hwaMwari?
Johani 13:2-5, 12-17 Jesu akapa sei muenzaniso unoshanda, uye akadzidzisei vaapostora vake ipapo?
Nei Jesu akararamira kuita kuda kwaMwari uye izvozvo zvaisanganisirei?